18/01/2018 - 17:30 : KOLIKOLY: Noho ny kolikoly misy ao anatin’ny fitsarana dia manjaka ny fitsaram-bahoaka ka vonona ny hanadio ao antin’ny fitsarana ny SMM, hoy filohany Faniry Erinaivo.
18/01/2018 - 16:30 : SENDIKAN’NY MPANDRAHARAN’NY FONJA: Ny fonjan’i Tsiafahy dia tsy fitazonana olona mbola tsy vohatsara, hoy ny filohan’ny sendikan’izy ireo.
Archive du 20161202
Tale jeneralin�ny Bianco Hoesorina fa � tsy namana � ?
Aza mikitikitika ireo mpiara-miasa akaiky amin�ny filoha raha tsy te hahita raharaha ! Izay indray izao no resaka mandeha taorian�iny raharaha fanodinkodinam-bola tany amin�ireo Kaominina, toy ny tao Ambohimahamasina Distrika Ambalavao,
Fikaonan-doha any Paris Hampindrana 6 miliara dolara ny mpamatsy vola
Nanomboka omaly ary hifarana anio any Paris, renivohitra Frantsay ny fikaonan-doha iarahan�ny mpitondra Malagasy sy ireo mpamatsy vola
Mpamatsy vola Mitaky fifidianana tsy misy � ni�ni �
Hifarana anio zoma 2 desambra ny fivoriana momba ny famatsiambola sy fampiasambola ho an�ny fampandrosoana an�i Madagasikara tanterahana ao amin�ny foiben�ny Unesco ao Paris- Frantsa.
Claudine A&C �Eto aho, ary tsy niala nandositra teto�
Nivoaka tamin�ny fahanginany Rtoa Razaimamonjy Claudine tompon�ny hotely lehibe fandraisam-bahiny A&C Palace etsy Ivato, taorian�ny raharaha nahoraka an-gazety mahavoarohirohy azy teny amin�ny Bianco.
Dinika ho fanavotam-pirenena Matoky fa hirodana ny fitondrana
Miandry ny fanangonan-tsonia amin�ny mpiray tanindrazana manerana ny nosy izay hataon�ilay vondrona politika dinika ho fanavotam-pirenena na ny DFP sisa ny fianakaviambe iraisam-pirenena, raha ny fanazavan�ity vondrona ity tetsy amin�ny espace dera etsy Tsiadana omaly,
Trosa lovain-taranaka !
Tena miakatra ry Jean ny zava-drehetra a ! Miakatra ny vidin-tsolika, miakatra ny vidin�ny PPN, miakatra an-tan�na ny dahalo, dia miakatra ihany koa ny rano eto an-drenivohitra. Miakatra avokoa izay te hiakatra e !
Toy ilay zava-manahirana iray izay ny milaza azy ka ny avo ihany no tovonana, hoy ny fitenenana. 620.000 ariary latsaka kely na 200 dolara eo ho eo,
Poa-basy Antanimena Nipotsaka ny atidohan�ilay jiolahy
Lehilahy 4 nikononkonona fanafihan-jiolahy no efa narahin'ny mpitandro ny filaminana hatrany Behoririka ka hatreny Antanimena omaly tokony ho tamin�ny 2 ora tolakandro.
Kolikoly eto Madagasikara Noresahan�ny �TV5 Monde�
Lohahevitra iray noresahana nandritra ny fihaonana an-tampon�ny Frankofonia ny 22 hatramin�ny 27 novambra 2016 tao amin�ny �TV5 Monde� ny tontolon�ny kolikoly eto Madagasikara.
Antananarivo Tsy ampy lanja ny 20%-n�ireo zaza latsaky ny 5 taona
Mbola olana goavana ho an�ireo ankizy madinika manerana ny Nosy ny tsy fahampian-tsakafo. Ho antsika eto an-drenivohitra dia ny 20 %-n�ireo
ARETINA SIDA 800 isan�andro no mamoy ny ainy maneran-tany
Mitombo isa hatrany ireo olona matin�ny aretina SIDA maneran-tany. Tafakatra 800 isan�andro ireo mamoy ny ainy maneran-tany izay mahatratra hatrany amin�ny 2 ka hatramin�ny 3 tapitrisa isan-taona raha ny tarehimarika voaray.
Tolotra fetin�ny noely Tsy ho diso anjara ireo mpanjifan�ny Canal plus
Saika mikarakara fanomezana manokana ho an�ny mpanjifany avokoa amin�izao ankatoky ny fetin�ny Noely sy ny faran�ny taona izao ireo karazana orinasa eto an-drenivohitra. Anisan�izany ny orinasa Canal Plus izay nampahafantatra ilay tolotra �grand show de noel� nanomboka omaly alakamisy 01 desambra